बारपाकमा एक महिनापछि बिजुली बल्यो, गुम्दामा अझै मर्मत भएन | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
बारपाकमा एक महिनापछि बिजुली बल्यो, गुम्दामा अझै मर्मत भएन
Published On : ६ जेष्ठ २०७७, मंगलवार १२:४७
गोरखाको बारपाकमा अबरुद्ध विद्युत सुचारु भएको छ । एक महिना पछि बिजुली बलेको स्थानीय बिरबहादुर घलेले बताए । बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोगमा विद्युतिकरणको मुख्य उपकरण मर्मतपछि बत्ती बाल्न सकिएको उनले बताए ।
बिजुली नहुँदा बारपाकका एकहजार दुईसय ८७ घरधुरीका मानिस एक महिना अन्धकारमा बस्न बाध्य बने । स्थानीयलाई कुटानी पिसानी र मोवाईल फोन प्रयोग गर्न समस्या भएको थियो । १३६ किलोवाट क्षमताको सो आयोजना २०४८ सालदेखि सञ्चालन भएको हो ।
धार्चे गाउँपालिकाको गुम्दामा भने बैशाख ४ गते चट्याङका कारण अवरुद्ध बिजुली अझै बलेको छैन । लकडाउनका कारण मर्मतमा समस्या भएको बताइएको छ । विद्युत नहुँदा बिजुली बत्ती, कुटानी पिसानी देखि वडा कार्यालयको कामकाज समेत प्रभावित भएको वडा अध्यक्ष तुलबहादुर गुरुङले बताए । २५ किलोवाटको उक्त लघु जलविद्यूत आयोजना २०६८ सालदेखि सुरु भएको हो ।